ish travels: A trek to Everest Base Camp and Three passes
A trek to Everest Base Camp and Three passes
विभिन्न ट्राभल म्याग्जिनहरुको जीवनकालमा एकपटक पुग्नै पर्ने गन्तव्यमा परिरहने सगरमाथा आधार सिविर सम्म पुग्ने रहर संसारमै कसको नहोला र? मेरो बर्षौ देखिको सपना पूरा गर्न अनि दशैँको बिदा सदुपयोग गर्न एक महिना अगाडी देखि नै सगरमाथा अाधार शिविर पदयात्राको योजना बुन्न थालेको थिएँ मैले । यो यात्रालाई अझै रोमान्चक बनाउन चुनौतीपूर्ण मानिने गन्तव्य "सगरमाथा आधार सिविर राउन्ड सर्किट-थ्री पासेज" (रेन्जोल पास - चोला पास - कोङ्गमाला पास) रुटमा पदयात्रा गर्ने निर्णयमा पुगेँ।
त्यसै अनुरुप फुलपातिको दिनको लागि मैले केइ हप्ता अगाडि नै काठमाडौ देखि लुक्ला सम्मको जहाजको टिकट पनि काटे । तर बिडम्बना लुक्लाको मौसमले साथ नदिएर दशैँका मेरा तीन दिन बिमानस्थलमै जहाज कुरेर बिते र चौथो दिन मात्र अर्थात दशैको टिकाको दिन बिहान म काठमाडौबाट लुक्ला उड्न पाएँ।
समुद्री सतहबाट २८४० मिटर उचाइमा रहेको संसारको सबैभन्दा खतरनाक विमानस्थल भनेर चिनिने तेन्जिङ हिलारी बिमानस्थलमा विमान अवतरण भएसँगै मेरो यात्रा प्रारम्भ भयो ।
Tenzing Hillary Airport, Lukla
बाटो बाटोमा राखेका माने घुमाउँदै, गुम्बाहरुलाइ दाहिने पार्दै, झोलुङ्गे पुल तर्दै, भरिया दाजुभाइहरु, पर्यटकहरुसँगै बाटोमा बाटो मिलाउँदै दुधकोशीको किनारै किनार मेरो यात्राले गति लियो।
लुक्लाबाट चेप्लुङ फाक्दिङ मोन्जो जोरसल्ला हुँदै सुन्दर सल्लाका जङ्गलहरु नाघेर म नाम्चे पुगेँ अनि पहिलो रात नाम्चेमै बसेँ ।
Suspension Bridge, on the way to Namche.
म नाम्चे पुग्दा सांझ परिसकेकोले गर्दा बजार पुरै कुहिरोले ढाकेको थियो । साँझमा एकछिन बजार घुमें। । नाम्चेमा आधुनिक कफि बेकरि पसल देखि लिएर रेस्टुरेन्ट डिक्स्को क्लब पुलहाउसहरुको ब्यबस्था रहेछ । म बसेको होटेलका दाइले भनेको सुने– ‘भाइ, नाम्चे काठमाडौको ठमेल भन्दा केइ कम छैन । पैसा भयो भने यहाँ नपाइने कुरा केही छैन ।’
Namche covered by Fog
अर्को दिन बिहानै चिया नास्ता गरेर मैले यात्रा प्रारम्भ गरेँ । सगरमाथा पदयात्राका लागि निस्केका पदयात्रीहरुले नाम्चे पुगेपछि आफ्नो गन्तव्य रोज्न सक्ने रहेछन् । सिधै तेङ्बोचे भएर सगरमाथा पदयात्रा गर्ने कि हिमताल गोक्यो हुँदै सगरमाथा आधार सिविर जानेकी अझ रोमान्चक रेन्जोला पास गोक्यो चोला पास हुँदै आधार सिविर जाने । मेरो गन्तब्य थ्री पासेज भयकोले म थामे तिर उकालो लागेँ ।
थामे भनेको प्रसिद्द पर्बतारोहिहरुको गाउँ रहेछ । किर्तिमानी आरोहिहरु तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, आप्पा शेर्पा, आङरिता शेर्पाको गाउँ पुगेपछि ‘हिमालको काखमा छ सानो मेरो गाउँ...’ भन्ने गित थामे लाई देखेर लेखेको भान भयो।
Thame Village, Thame
Appa Sherpa's home.
भित्ता भरी गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड्सका सर्टि्फिकेट अनि सगरमाथाको चुचुरोमा खिचेका तस्बिरहरु झुन्ड्याइएका आप्पा शेर्पाको होटेलमा बिहानको खाना खाएर म लुङ्देनतिर उकालो लागेँ ।
बाटोमा भेटिने स्वदेशी विदेशी अपरिचित सबैसँग म आत्मियताका साथ बोल्थेँ । एक्लै यात्रा गर्नुको मजा यही त हो । एकल यात्राका क्रममा भेटिएका साथीहरु मेरा लागि निकै नै महत्वपुर्ण हुन्छन् । यी अपरिचित सँगको आत्मियताले मलाइ बाटोमा उर्जा प्रदान गर्छन। नया साथीहरुका नयाँ नयाँ ठाँउका कथाहरु सुन्छु अनि आफ्ना कथा सुनाँउछु। बाटोमा भेटेका दुइजना अपरिचित जापानी नागरिकहरु सङ्ग भलाकुशारी गर्दै म लुङ्देन पुगेँ। भोलि रेन्जोला पास कसरी गर्ने भनेर एक्लै योजना बुन्दै त्यो रात लुङ्ग्देन मा बिताएं।
मेरो यात्राको तेस्रो दिन बिहान ५ बजे टाउकोमा जडिएको टर्च लाइट बालेर मैले यात्रा प्रारम्भ गरेँ । मेरा तीन पास हरु मध्य पहिलो रेन्जोला पास गर्न नै गार्हो भयो । ठाडो उकालो अनि ढुङ्गै ढुङ्गामा टेकेर हिँड्नु पर्ने । पोहोर सालको भुकम्पले बाटो बिगारेकोले बाटोको अबस्था एस्तो भएको भन्दै थिए एकजना गाइड दाजु । थकाइले मरेतुल्ले म एक एक पाइला गर्दै उकालो चढेँ । माथि उक्लिसकेपछी त्यहाँबाट देखिने दृश्यहरुले सबै थकान एक झमटमै बिर्साइदियो । टाकुरोमा मैले १ घन्टा जति बिताँए । फोटाहरु खिचेँ । त्यहाँबाट देखिने शिखरहरु सगरमाथा, लोत्से, मकालु, कञ्चनजंघा र चोयुलाई निकै नजिकबाट नियाले र ओरालो लागें ।
Mount Everest seen from Renjo La pass
त्यो दिन रेन्जोला पास तरेर म गोक्यो उपत्यकामा गएर बास बसे । गोक्यो तालको त्यो सफा पानी अनि ठ्याक्कै अगाडि हिमालहरु देख्दा साँच्चै स्वर्ग भनेको यहि नै पो हो जस्तो लाग्थ्यो।
गोक्यो सगरमाथा पदयात्राको आकर्षक गन्तव्य हो । धेरै पर्यटकहरु गोक्यो र गोक्यो रि सम्म मात्र पदयात्रा गर्न आउँछन् । अनि अलि धेरै छुट्टी भएकाहरु र अलि रोमान्चक पदयात्रा चाहनेहरु चोला पास तरेर सगरमाथा आधार शिविर पुग्छन् ।
५३५७ मि अग्लो गोक्यो रि गोक्यो उपत्यकाको एउटा टाकुरो हो जहाँबाट गोक्यो तालको मनोरम दृश्य देखिन्छ । बिहानै सुर्योदय गोक्यो रि बाट हेर्नुपर्छ भनेर म ५ बजे उठेर गोक्यो रितर्फ उकालो लागें । तीन घन्टाको नाकै ठोकिने जस्तो ठाडो उकालो लागेपछि गोक्यो रिको चुचुरोमा पुगेँ । त्यहाँ एक घन्टा जति बिताएर तल गोक्यो उपत्यका घुमेर खाना खाएर फेरि यात्रा थालेँ । गोजुम्बा ग्लेसिएरमाथि हिँडेर म थाक्नाक भन्ने ठाउँ पुगेँ । त्यो रात थाक्नाकमै बिताएँ ।
आर्को दिन म बिहनै ५ बजे चोला पास जाने बाटो हिँडेँ टाउकोमा जडेको टर्चलाइट बालेर । चोला पास तीन पासहरु मध्य सबैभन्दा गार्हो मानिन्छ। आधा घन्टा जति हिउँको बाटो चिप्लिने डर मनमा राख्दै उकालो लागेँ र सजिलै पास तरेँ पनि।
चोला पास तरेर चोलात्से हिमालको काखमा रहेको जोङ्गला गएर खाना खाँए। पदयात्रीहरु चोला पास तरेर जोङ्गला बास बस्दा रहेछन तर मेरो यात्रा रोकिएन । चोला सो हिमतालको किनारै किनार लोबुचे खर्क तरेर म लोबुचे पुगेँ। त्यहाँ पनि मेरो यात्रा रोकिएन । त्यो भन्दा माथिल्लो बस्ती गोरकशेपमा गएर टुङ्गियो मेरो त्यो दिनको यात्रा । गोरकशेपको एकजना दिदिले भनेको याद आयो “भाइ तो मान्छे हो कि घोडा हो?’’ गोरेकशेप सगरमाथा पदयात्राको अन्तिम मानव बस्ती हो । पाँच हजार एक सय चालीस मिटरमा रहेको गोरेकशेपमा होटल–लजको राम्रो सुविधा छ । सगरमाथामा पर्यटकले चाहे जस्तो सुविधा पाउँछन् । त्याहाँ सम्म सबै सामगृहरु भरिया लगाएर लानु पर्ने भएपनि तारे होटलको याद मेटाउने खालकासुविधा पनि उपलब्ध हुन्छन् त्यहाका होटेलहरुमा। गोरेकशेप सगरमाथा आधार सिविर र कालापत्थर जाने बिन्दु हो । पर्यटकहरु सुर्योदयको लागि कालापत्थर जाने गर्दछन भने अर्को दिन सगरमाथा आधार सिविर जाने गर्दछन।
म आर्को दिन विहान कालापत्थर गएर सुर्योदयसँगै सगरमाथा, नुप्तसे, पुमोरी, आमाडब्लम, मेरा पिक, थामासेर्कु, लगयत अन्य शिखरहरुको दृश्यावलोकन गरेर गोरकशेप झरेँ । ५५५०मि अग्लो कालापथ्थर सगरमाथा आधार सिविर पदयात्रा मार्गको सबैभन्दा उचचतम बिन्दु हो जहाबाट ३६० डिगृमा हिमालहरु देख्न सकिन्छ।
म त्यही दिन गोरकशेपमा नास्ता खाएर आधार शिविर गएँ । अहिले सगरमाथा चढ्ने मौसम नभएकोले आधार सिविर खाली थियो । पर्यटकहरुको घुइँचो मात्र थियो । सगरमाथा चढ्ने सपना पूरा हुन नसकेपनि सगरमाथाको आधार सिविरलाई छुन पाउँदा मात्र पनि पर्यटकहरु निकै गौरवान्वित भएको महसुस गर्दा रहेछन । म भने एक दिन सगरमाथा चढ्ने गरि आउँछु भनेर आफ्नो बाटो गोरकशेप तर्फ लागेँ ।
त्यो दिन म गोरकशेपबाट दुधकोशी नदिको किनारमा रहेको सानो बस्ती लोबुचे आएर बास बसेँ । लोबुचेमा पर्यटकहरुको अत्याधिक भिड भएकोले म ४ जना भरिया दाइहरुसँगै एउटै कोठामा सुतें जुन मेरो लागि एक प्रकारको रमाइलो अनुभव रह्यो ।
बिहान ५:३० बजे तिर नास्ता खाएर म निस्के । आज थ्री पासेजमध्ये अन्तिम कोङ्गमाला पास चढ्नु थियो ।
कहिले पनि नआएको ठाउँ, त्यस्तै अप्ठ्यारो बाटोे । बाटो सोध्नलाई कोही पनि थिएनन् । एक्लै ढुङ्गाले बनाएका साना साना घर पछ्याउँदै म हिँड्न थाले । मलाइ एउटा बिन्दुमा एक्लै यात्रा गरेकोमा पछुतो लागेको थियो, मनमनै सबै ठिकै हुन्छ सबै ठिकै हुन्छ भन्दै हिँड्न थाले।
सायद अन्तिम गन्तव्य भएर पनि होला अनि अलि थकाइ धेरै नै लागेर होला मलाइ यो चढ्न अलि गाह्रै भयो । हिँडाइ भन्दा धेरै समय थकान मेट्दै एक्लै हिँडिरहेँ। हेर्दा अलिकति माथि जस्तो लागेपनि मलाइ पासमा पुग्न ४ घन्टा लाग्यो, तर पनि जसो तसो ५,५३५ मिटर अग्लो पास चढेँ ।
View from Kongmala Pass
माथि उक्लेसी थकान सबै एक छिनमा मेटियो। त्याहाँबाट देखिने मनोरम हिम्शृन्खलाहरु क्यामरामा कैद गरेर म छुकुङ गाउँ तर्फ लागें । निकै लोभलाग्दो अनि रमणीय छुकुङ गाउँ मनमोहक आमादब्लम हिमालको काखमा छ ।
सामान्यतयाः सगरमाथा आधार सिविरको पदयात्रामा जाने पर्यटकरु यो गाउँ नजाने कारणले गर्दा ओझेलमा परे झैँ लाग्यो यो गाउँ।
छुकुङमा खाना खाएर म ओरालो लागेँ । ओर्शो शोमारे प्याङ्बोचे देबोचे हुँदै म तेङ्ग्बोचे आएर बास बसे ।
अर्को दिन बिहानै चियाको चुस्कीसँगै म तेङ्बोचेबाट ओरालो लागेँ र दुई घन्टामा नाम्चे पुगे । अत्यन्तै सुन्दर कचौराको आकारको नाम्चेको फोटो लिएँ । नाम्चेको सिरमा रहेको एभरेस्ट भ्यु पोइन्ट होटेलमा पुगेर एक छिन थकान मेटेँ अनि फेरि यात्रा सुरु गरेँ । आधार सिविर सम्म पुग्न नसक्ने कति पर्यटकहरु यहिँबाट सगरमाथाको दृश्याबलोकन गरेर फर्कन्छन। नाम्चेबाट जोरसल्ला, मोन्जो, फाक्दिङ्ग हुँदै १५/१६ दिनको लागी प्लान बनाएको ट्रेक ८ दिनमा सकेर लुक्ला आइपुगे ।
From Everest View Point, Namche.
भोलि बिहान सबेरै काठमाडौ उड्न पाइएला भन्ने आसमा त्यो रात लुक्लामा मीठो खाना र राम्रो विस्तारा सङ्गै बिताएँ ।
भोलि पल्ट १२ बजे मात्र मेरो काठमाडौं उड्ने पालो आयो । मनमा लुक्लादेखि सगरमाथा आधार सिविर सम्मका रमाइला अनुभुतिहरु सम्झिदै काठमाडौ आइपुगें ।
अगिल्लो साता मात्रै चर्चित ट्राभल गाइड बुक प्रकाशक लोन्ली प्लानेटले सन् २०१७ का लागि सबैभन्दा उत्तम गन्तव्यहरुको सूचीमा नेपाललाई पाँचौ स्थानमा राखेको छ र ‘बेस्ट भ्यालु डेस्टिनेसन’ को नम्बर १ मा पारेको छ।
अनि पटक पटक नेपाल विभिन्न ट्राभल म्याग्जिनहरुको जिवनकालमा एकपटक पुग्नै पर्ने गन्तब्यमा परिरहेकै हुन्छ। छुट्टी मिलाउनुस। साथी खोज्नुस घुम्न निस्किहाल्नुस। साथी नभेटे एक्लै निस्किनुस। बिज्ञहरु भन्छन हाम्रो नेपाल त्यस्तो देश हो, जहाँ घुम्न हिँड्नुअघि धेरै सोचिरहनु आवश्यक छैन । निकै छोटा दूरीमै भेटिन्छन् रमाइला र मनमोहक गन्तब्यहरु।
Posted by ishzz at 7:10 PM
Labels: #adventure, #ebcTrek, #everest, #everestbasecamp, #Lonetraveller, #threepassess, #travelalone
Bipin Thapa November 26, 2016 at 11:38 PM
दाइ तपाईँ त दारीवाला घाेडा रैछ नि।
Suraj SHAKYA November 27, 2016 at 6:21 PM
Uzol rai November 28, 2016 at 2:41 PM
Uzol rai November 28, 2016 at 2:42 PM
अलङ्कार अर्याल December 1, 2016 at 1:36 PM
अनि धेरै धेरै बधाई! आफु नै त्यहि पुगे जस्तो भयो... सार्है राम्रा फोटाहरु! अनि यो रमाइलो लाइन - गोरकशेपको एकजना दिदिले भनेको याद आयो “भाइ तो मान्छे हो कि घोडा हो?’’
Bijen Ks December 18, 2016 at 3:41 AM